ခြေဖဝါးတော် နုနု – Shoes | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ခြေဖဝါးတော် နုနု – Shoes	42
Posted by ဇီဇီ on Jul 8, 2016 in Creative Writing, Entertainment, How To.., My Dear Diary, Society & Lifestyle, Style & Beauty | 42 comments
ဖိနပ် လေးတွေ အကြောင်း စ ရအောင်။
လက်တန်း ရေးလို့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပဲ အရင် ရေးမယ်။
လက်ကိုင်အိတ်တို့ တခြားလှပပစ္စည်းတွေ မကြိုက်ခင်ကတည်းက ဖိနပ်လှလှတွေ မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းတွေကို မြင်တဲ့နေတာမှာတင် ငမ်းတတ်ခဲ့တာ။
ကိုယ်တက်ခဲ့ရတာ နယ်ကျောင်းး၊ ဘာ အလှပြင်လို့မှ မရ၊ လက်ဝတ်ရတနာမဝတ်ရ တဲ့ အချိန် ၅ တန်း လောက်ကတဲ့ မွေးမေလေ့က ရှူးလေးတွေ စီးခိုင်းတာ။ တောမှာတော့ စတားပေါ့လေ။ လုံချည်နဲ့ ရှူး လိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်ပျော်ပျော်ဂျီးကို ပဲတွေပေးတာ ဆိုတာ။
ပြန်တွေးမိမှ ရှက်လည်း ရှက်ပါတယ်။ ရှက်လည်းမရှက်ပါဘူးး
မွေးမေလေ့က ဖိနပ်ခရေဇီ၊ သူ့ဆီမှာ မိန်းမဆန်သော ဖိနပ်အမြင့်တွေ အားကြီးပဲ။
အကြိုက်မတူတာက အဲဒီမှာ စ တယ်။ ကိုယ်က သူ့ ဒီဇိုင်းတွေ မကြိုက်ဘူးး
သူ က ကိုယ်ရွေးတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ကြမ်းသတဲ့။
အမှန်တော့ မွေးရာပါ ညာဏ်ကို က ကိုယ်နဲ့ လိုက်မှာ ကိုယ်သိနေတဲ့ ၂ ယောက်မို့ ရွေးချယ်ခွင့်ရကတည်းက ကွဲလွဲကြတာ ခုထိပဲ။
ဖိနပ်ဆိုတာလည်း ခေတ်စားသလောက် ဘယ်လိုလုပ် ဝယ်နိုင်မတုန်းး၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကို မရှာနိုင်ခင်တော့ သူဝယ်ပေးတာကို ဟိုလိုလေး ငြင်း၊ ဒီလိုလေး ပူစာနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံလေး စီးရတယ်။
ဖိနပ် အမြင့်ကို ၇ တန်းမှာ စ စီးခိုင်းတော့ အရပ်ပုတဲ့ ကိုယ့်မှာ အဲလို ခပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို သိပ်ကြိုက်တာနဲ့ ဖိနပ် အမြင့် ခရေဇီ ဘဝ ရောက်တော့တာပဲ။
အမြင့်တိုင်း စီးလို့ ရလား ဆိုတော့ မဟုတ်။ အမြင့်တိုင်း ကိုယ်နဲ့လိုက်လား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်။
အာ့ကြောင့် ကိုယ်ဖိနပ်ရွေးရင် သူများနဲ့ ပြောင်းပြန်။ အပေါ်ယံ ဒီဇိုင်းကို အရင်မကြည့်နိုင်ဘူးး၊ အသေးစိတ် ဖိနပ် ဒီဇိုင်းကို အရင် ချေးများတယ်။
ကိုယ်က ခြေဖျားကြီးကြီးကားကားမို့ အောက်ခံ ပလက်ဖောင်း နဲ့ဆိုးပြား (platform & sole) က လေးထောင့်မှ ခြေထောက်သက်သာတယ်။
ခြေထောက်တုတ်တာမို့ ခြေချင်းဝတ်မှာ ကြိုးပြန်ပါတာရှောင်ရတယ်။။
လေဒီရှူးအဖုံးက ဘိုမတွေ လို ခြေဖျားတင်ဖုံးတာမျိုး ရွေးလို့ကို မရ။ လေဒီရှူးအလုံဆိုလည်း ပုံတုံးတာမို့ လေဒီရှူး လုံးဝမစီးး
ဖနောင့်မပိတ်တဲ့ ရှူးမျိုးကိုပဲ ထိပ်ပိုင်း ကျယ်ကျယ်ရွေးစီးဖြစ်တယ်။
ဘု ဆိုရင် ခြေသလုံးလယ်လောက်ထိ ရှည်ရင်ရှည်၊ ဒါမှ မဟုတ် ခြေထောက်တစ်ခုလုံး လုံလောက်ရုံဖြစ်ရင်ဖြစ်။ ဘု မှာ ခြေမျက်စိလောက် လည်တို က ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ လုံးဝ အရုပ်ဆိုးတယ်။
ဒေါက်မှာလည်း ပွိုင် ဒေါက်တွေ ရှောင်ရတယ်။ ဒေါက် အတုံး (သို့) ဒေါက် အတုတ် (သို့) ခွါလျှော ဒီဇိုင်းမှ လိုက်တယ်။ လူကောင်ထွားတာမို့ ပွိုင် ဒေါက် လုံးဝမလိုက်။
ဖိနပ်အပါးမှာဆို ကျွန်ဖိနပ် ဒီဇိုင်း (ကြိုးတွေ ခြေသလုံးထိ) စီးချင်စီး။ မဟုတ်ရင်တော့ တဘားခြေမကွင်း ဒီဇိုင်းက အကြိုက်ဆုံး၊ အလိုက်ဆုံးပဲ။ ဒါတောင် ပလက်ဖောင်း နဲ့ ဆိုး ပြား လေးထောင့်က အင်မတန်ရှာရခက်။
နောက်ပြီး အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဖိနပ်က ပုံတော် ဖိနပ်ပါဗျာ။
ဒါတော့ မန်းလေးသူပီသသားး အရင်က မိန်းကလေးတွေ ခြေ တစ်လှမ်း ဘာ တစ်သန်း ဘာညာ ဆိုတာ ဟုတ်မယ်ဗျ။
ပုံတော်ဖိနပ်က အတော်လေးတာကိုးး ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ စီးစီးပိုင်ပိုင် လေးလေးကို စီးနေကျသွားရင်တော့ တခြားဖိနပ်တွေကပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်သွားရော။
ပုံတော်ကို ဘာ စီးကွင့် အလက်လက်မှ မပါပဲ သဲကြိုးပြားကြီးကြီးနဲ့ ခုံထူထူ ရှားညိုဟာ ကိုယ့် ခြေထောက်တွေကို အလှဆုံး အသန့်ဆုံးဖြစ်သွားစေတယ် ဆိုတာ ညီမလေးတို့ သိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
အရောင် ဆိုရင်တော့လားး ??
များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်း ကွက်တိ ဆိုရင် ၂ ရံဆောင်ထားတယ်။ အဖြူနဲ့ အနက်။
အပါးဆို အသားရောင် စီးချင်လေ့ရှိတယ်။ တခါတလေ ခရမ်းတို့ လိမ်မော်တို့ အရောင်တွေ ဆွဲဆောင်ရင်လည်း ဝယ်ဖြစ်တယ်။
ဖိနပ်ကို အသန့် စီးရမှာကို မကြောက်ဘူးး၊ ဒါမှ ဖိနပ်ကို အားနာပြီး ခြေထောက် ကို သ ဖြစ်လို့။ ဘယ်သူမှ ဖိနပ်အဖြူ မစီးရဲတဲ့ အချိန်ထဲက ဖိနပ် အဖြူ ရှာစီးပြီး ခြေထောက် သ နေရတာမို့ မျက်နှာထက် ခြေထောက်တွေက ပိုလှ ပိုသန့်တယ်လို့ အပြောခံရဖူးတယ်။
ကျောင်း စ တက်ကတဲ့က ခြေပိတ်တွေပဲ စီးလွန်းလို့ နင့် ခြေမ ကို မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ လို့ အစ ခံဖူးတယ်။ မန်းလေးက နေ၊ လေ၊ ဖုန်က ပေါ်တဲ့ အသားမှာ မည်းခြောက်သွားတာမို့ ခြေထောက်ကို ကာကွယ်ရတာရယ်။
တက်ရတဲ့ ကျောင်းက မြို့ပြင်မှာ။ ကျောင်းကားစီးရင် ကိုယ့်နား ဘူမှ မကပ်ဘူးး၊ ရပ်စီးရင် နေရာဖယ်ပေးကြတယ်။
ဘာလို့တုန်းဆို ခြေချော်၊ ကားဘရိတ်အုပ်တို့ဘာတို့မှာ ဒေါက်အထူကြီးနဲ့ တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်နင်းမိလို့။
ဖိနပ် ဒေါက်နဲ့ လူသတ်လို့ရပါတယ်။ တော်တော်တန်တန် ညှို့သကြီးကို သာ ကန်လိုက် ခွေလဲသွားမှာ။ ဟိ။ လူကြမ်းမကြီးပါဆို။
အိမ်ကတော့ ဘီလူးကိုယ် လို့ ခေါ်တယ်။ ဖိနပ်တွေမှန်သမျှ ဒီလောက် ကြိုးစားတာတောင် အသန့်အပြန့်မကျန်ခဲ့ဘူးး သက်တမ်းမရှည်ဘူး၊ ပွန်းပဲ့နေတာရယ်မို့၊ ကြာကြာအစီးမခံဘူးး
အဲဒါ ကြောင့် ကြိုက်တာ ကိုက်တာ တွေ့ရင် ၂ ရံလောက် ဝယ်ဝယ်ထားရတာ။ မဟုတ်ရင် အသန့်စီးရမယ်ဟေ့ဆို စီးလက်စ ဖိနပ်က ချွတ်ကို မထားရဲစရာ။
ဟိ ဖက်ရှင်တွေကို ပြောင်းပြန် လုပ်ဖူးပါရဲ့။
ဘောင်းဘီအပျော့စားတွေနဲ့ ပုံတော်ဖိနပ် စီးဖူးတယ်။
လုံခြည် အပျော့အရှည် အရှည်နဲ့ နဲ့ ဘု လည်တိုနဲ့ စီးတယ်။
သီရီဂျေမောင်မောင် က စကပ် အရှည်နဲ့ စနီကာ တွဲစီးတုန်းက လိုက်စီးဖူးသေးတယ်။ (ကိုယ်လို ဂျပုကတော့ ဘယ်လှမတုန်းး)
ထင်ရာလုပ်ဖူးတာတွေပြောပြတာပါ။ ဟိ။ ထားတော့။ လေပွါးတာလေး ခန ရပ်ပြီး ဖိနပ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို သွားရအောင်။
ပို့(စ) က မိန်းကလေး ဦးစားပေးမို့ အမျိုးသမီး ဖိနပ် ပုံစံ အမျိုးအစားလေးတွေပါ ဆက်သွားမယ်နော်။
ဘရန်း ရန်း မလို့ ကြံလိုက်ပေမဲ့ တစ်နေရာစီ တစ်နိုင်ငံစီမှာ လူကြိုက်များတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဘရန်းတွေက မတူတာမို့ မပြောတော့ဘူးး
ဒါကတော့ ဒီဇိုင်း နာမည်တွေပေါ့။
အမျိုးသားလေးတွေဖို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်လေ။ :P
ဖိနပ်ဆိုတာကလည်း အရုပ်မမှာ စီးပြထားလို့ လှရုံနဲ့ ကိုယ်နဲ့မလှသလို သူများ စီးထားလို့ လှတာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ လှတယ်လို့လည်း ထင်လို့မရစကောင်းဘူးး။
သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှုရယ် ၄ ခုစုံမှ ဖိနပ်ကောင်းရတယ်။
ကောင်းကင်ပြာလေး ရေးဖူးသလိုပေါ့။ ဖိနပ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကိုယ်နဲ့ မသင့်တော်ရင် စီးနေရသရွေ့က ဒုက္ခရယ်။
ဖိနပ် ဘယ်လို ရွေးမလဲ ဆက်ပွါးရအောင်။
၁) ကျနော်ကတော့ ကျနော် ကိုင်တဲ့ အိတ်ရဲ့ အရောင်တွေ အတိုင်းပဲ ဖိနပ် အရောင်ကို ရွေးပါတယ်။ (ဘာလို့ဆို အိတ်နဲ့ဖိနပ် အရောင်မတူရင် ဖက်ရှင်အရ ဂွမ်းလို့ပါ။ အဲတော့ အဖြူ/အနက်/သားရေရောင်/သမင်ရောင် စသည်ဖြင့်ပေါ့)
၂) ဘယ်နေရာနဲ့မဆို များသောအားဖြင့် ဘယ် ဝတ်စုံနဲ့မဆို လိုက်မဲ့ ပုံ မျိုးပဲ ရွေးတယ်။ အများကြီး ဝယ်ရအောင် ဘတ်ဂျက်က စကားပြောသေးး၊ ဆိုတော့ ၃ လက်မ ဒေါက်လောက်နဲ့ ကြိုးသိုင်းဟာ ဘောင်းဘီနဲ့ရော လုံချည်နဲ့ရော စကပ်နဲ့ပါ အိုကေတာမို့ အဲဒီ ပုံကို မရှိမဖြစ်ထားပါတယ်။
၃) အပါးဆိုရင်လည်း လုံချည်ရော၊ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ပါ စီးရတဲ့ ဒီဇိုင်းး တဘား ခြေမကွင်း စီးရင် စီး၊ မဟုတ်ရင်တော့ ကြိုးရှုပ်ရှုပ်လေးတွေ နဲ့ အပါးဆိုရင်လည်း စကပ် အရှည်နဲ့ပါ အိုကေတာမို့ ဆောင်ထားတာမမှားပါဘူးး။
တဘား ခြေမကွင်းလို့ ခေါ်တာ ဒီလိုပုံမျိုးး အောက်ခံပြားက လေးထောင့်ကျရင် ပိုလှတယ်။
၄) အရောင်များ ဘာရွေးရမှန်းမသိရင် အသားရောင်ကို ရွေးတယ်။ ခြေထောက် ပိုသန့်သလိုဖြစ်တယ်။ အဝတ်အစား အရောင်မရွေးဘူးး၊ လက်ကိုင်အိတ်အရောင်တွဲမမှားဘူးး
၅) ဖိနပ်တွေကို များများ စမ်းစီးကြည့်ပြီးမှ ကိုယ့်ခြေထောက်ချို့ယွင်းချက်ကို ဘယ် ဒီဇိုင်းက ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သိပါတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ဘယ်နေရာလှတယ်။ ဘယ်နေရာမလှဘူးတော့ သိရမှာပေါ့လေ။
ကိုယ့်ခြေထောက်က အပိန်လား အဖောင်းလားး
ခြေသည်းက အရှည်လား အတိုထားလားး
ခြေချင်းဝတ် တုတ်သလားး၊ သွယ်သလား၊ အဲဒါတွေသိပြီးမှ အဲဒီ မလှဘူးထင်တဲ့ နေရာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဖိနပ်မျိုးရှာရမှာပေါ့။
၆) ဖိနပ်ကို အွန်လိုင်းက မဝယ်ပါနဲ့။ ယိုးဒယားမတွေ ကိုရီးယားမတွေ စီးပြလို့ လှတိုင်း အဲဒီနောက်ကို စိတ်မပါသွားပါနဲ့။
၇) အတော်မြင့်မြင့် စီးချင်ရင်တော့ အရှေ့ပိုင်း ပလက်ဖောင်းပါ မြင့်တဲ့ ဖိနပ်မျိုး ရွေးရင်တော့ ကိုယ် ဇောက်ထိုးမဖြစ်ဖူးပေါ့။ ငိငိ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီလားတော့မသိ။
ကိုယ်တွေ့နဲ့ ယှဉ်ရေးတာမို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိရင်လည်း ထောက်ပြသွားကြပါလို့။
ရေးရင်း ရေးချင်တာတွေ မေ့မေ့သွားလို့ ကော်မန့်မှာ သတိရတာတွေကို ဆက်ပြောသွားမယ်နော်။
Mr. MarGa says: Shoe တင်မက Boots ပါ ဆက်ဆွဲပေးပါလို့စ်
မမချွိ says: ငင်. Shoes ဆိုတာ ယေဘူယျ ခြုံပြောတာလေ.. 😳😳😳
Wow says: ဖိနပ်ကတော့ ကိုယ့်ဘွနဲ့ကိုယ် စင်ဒရဲလားဖိနပ်စီးမရတဲ့ခြေထောက် တော်တော်တန်တန် ဆိုးမာရင်ခြေထောက်တန်း ပေါက်တာမို့ လှတာတွေသိပ်ဦးစားမပေးပဲ ပုံရှင်းရှင်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မဲ့ဖိနပ်မျိုးပဲစီးဖြစ်တယ်
ကိုယ်တွေက ဂျူးပိတ်သတ်ဆိုတော့ အရပ်မြင့်ရကြားထဲ ယောက်ကျားတွေကို အားမနာပဲဖိနပ်အမြင့်ကြီးစီးတဲ့မိန်းမဆိုပြီး တ္တုထဲဖတ်ရပြီးထဲက ကလန်ကလားနဲ့ ဖိနပ်အမြင့်ပေါ် မရအရတွယ်တက်တော့တာ ခုတော့ naturaluzer ဖိနပ်စီးနေတယ်လို့ လာကြွား အဲလေ လာပြောတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: စင်ဒရဲလားတော့ ဒီတသက်မဖြစ်..
ခြေ အခွက်ပုံ ပါတဲ့ ယောက်ကျားဆန်တဲ့ ပိုလို ဖိနပ်တွေလည်းး သိပ်ကြိုက်တာာာ..
စိန်စီ ဖိနပ်တွေ ကတော့ ကိုယ် နဲ့ သိပ် အရုပ်ဆိုးးတယ် 😂😂
Kaung Kin Pyar says: ဖိနပ်သရဲမို့ ဒီပိုစ့်က အတော်တန်ဖိုးရှိတယ်… ငယ်တုန်းက ၀န်ခံရရင်.. မိသားစုထဲမှာ ..ကိုယ့်ကို အာရုံစိုက်ခံချင်ခဲ့တာ….။ ထင်သလောက်ဖြစ်မလာတော့ အပြင်ဘက်လှည့်ကရော… ခိ..
ဒီတော့ အနီးစပ်ဆုံးနည်းလမ်းက ဖိနပ်ဖြစ်လာတယ်…။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဂျပုဆိုတော့.. ကွက်စတိပဲ… ခဲတံအရွယ် ၃လက်မလောက် မြိနေတဲ့ ဒေါက်ကိုစီးပြီး.. မြင်သမျှလူက တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘယ်အချိန်များ လဲသွားမလဲဆိုပြီး အာရုံစိုက်ခံနေတာမျိုးကို ငယ်စိတ်နဲ့ အတော်ပျော်ခဲ့တာ…။
အသက်ကြီးလာတော့ ဒါတွေလဲ မရှိတော့ပါဘူး…. အာာဟီးးးးး။ ဒါတောင် အကျင့်က မပျောက်သေးဘူးရယ်။ Pump လောက် မမြိပေမယ့်.. T Strap လောက်တော့ အမြဲ ဆောင်ထားဖြစ်တယ်…။ ဖိနပ်ဆို ကြိုးပါတာကို ပိုသဘောကျတာ…။ ဒီအမြင့်လောက်ဆို ကြိုးက ထိန်းသွားတယ်လေ…( တခါတလေမှာ ဒေါက်အမြင့်ကြောင့် insole တောင့်မခံနိုင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တာတော့ ရှိတယ်)
အဲ.. ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ရင်တော့ Open Toe လိုမျိုး နောက်ဘက်အပိတ်ပါတာက ပိုအဆင်ပြေတယ်…( ခုတော့ နီညိုလေးတစ်ရံ ၀ယ်ပြီး စိတ်တိုင်းကျနေတယ်..)။ အဲ့ကလေးလေးတွေက ဘောင်းဘီအောက်စ ခြေဖနောင့်မှ မညပ်နေတော့ဘဲ ဒေါက် အောက်နားလောက်ထိ အစက ခပ်ပြေပြေကျအောင် လုပ်ပေးတယ်…။
Boot တွေတော့ ဒီရာသီနဲ့ မကိုက်တာရော ကိုယ်နဲ့မလိုက်တာရောကြောင့် တစ်ခါမှ မစီးဖူးတဲ့အထဲပါတယ်..။
ဟိုတစ်ခါ ခြံထဲမှာ ထိုင်ရိုက်ဖူးတဲ့ပုံထဲကလို ကာကီရောင်အရင့် ကြိုး အတော်အသင့်ခြေဖမိုးရှုပ်နဲ့ တပြေးညီဖြစ်နေတဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို အာရုံရောက်နေတယ်….။ သူက လမ်းလျှောက်ရ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး.. တော်ရုံ Taxi ခ ချွေတာပေးတယ်လေ… :P (Gladiator လောက် ရှုပ်တာမျိုးတော့ မကြိုက်မိ..)။ ရုံးသွားဖို့အတွက်တော့ ဒါမျိုး စီးဖြစ်နေတယ်…။
တချို့က ရုံးက ဖိနပ်အပါးလိုမျိုးတွေဆောင်ထားပေမယ့်… ဆုကတော့ အဲ့ Open toe ကို ဆောင်ထားတယ်..။
ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး… ပုံစံတစ်ခုရှိတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံလောက်စီးလိုက်ရရင်ကို စိတ်ထဲ ကွန်ဖီးဒန့်တယ်…။ ဖိနပ်ရွေးချယ်မှုပုံစံကို ကြည့်ပြိးတော့တောင် အဲ့လူရဲ့ စိတ်ကို ဖမ်းဖတ်ခန့်မှန်းဖူးသေးတာ… ခုချိန်ထိလဲ ဒီထဲက ဖိနပ်လှလှလေးတွေနဲ့ လျှောက်သွားနေတဲ့ မိန်းခလေးတွေများမြင်ရင် ရောက်တဲ့နေရာရပ်ပြီး လိုက်ငမ်းနေမိတုန်းရယ်…
မမချွိ says: ဟိ.
ဆု ပို့စ် ဖတ်ပြီးးထဲက ရေးးမယ်ကြံတာ ခုမှ ရေးဖြစ်တယ်..
ဖိနပ်သက်သာရင် တက်ဆီခ သက်သာတယ်ဆိုတာ အဟုတ်ပဲ 😂😂
မမချွိ says: ဖိနပ်များ….. (http://mandalaygazette.com/211514)
Posted by Kaung Kin Pyar on Mar 5, 2015 မိန်းခလေးတွေကိုသာ…သူတို့အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းစာရင်းဆိုပြီး…စစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…ဖိနပ်တွေနဲ့ အိတ်တွေက ထိပ်ဆုံးနေရာက ပါမှာပဲ….
ဆိုလိုတာက…မိန်းခလေး တော်တော်များများ…ဖိနပ်နဲ့ အိတ်တွေကိုသဘောကျကြတယ် ဆိုတာပါ…..။
ဒီမှာတော့ ကျမ … ဖိနပ်တွေအကြောင်း ပြောချင်တယ်…
ဟိုးငယ်ငယ်အရွယ်ကနေ… ခုချိန်ထိ ကျမ ဖိနပ်တွေကို အရမ်းစွဲလမ်းတယ်…..။ ဘယ်အချိန်က စပြီး သတိထားမိသလဲဆိုရင် ကျမရဲ့ (၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာပါ…
(၆)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ကျမရဲ့ (၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို မှတ်မှတ်ရရဆိုပြီး ကျမအဒေါ်က အဖွားခြံထဲမှာ မွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်ပေးတယ်…။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ပြီး အနီးအပါးက အသိတွေကို အကျွေးအမွေးနဲ့ ဧည့်ခံတာပါ….။
မွေးနေ့ရှင်ကျမကတော့ လာပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထက် ဧည့်သည်တွေရဲ့ ဖိနပ်တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်….။ အမေတို့က ကျမပျောက်သွားလို့လိုက်ရှာတိုင်း တခြားနေရာ ရှာစရာမလို….အိမ်ရှေ့ဖိနပ်ချွတ်နေရာမယ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဧည့်သည်တွေရဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံချင်းကို လိုက်ကြည့်နေတဲ့ကျမကို တွေ့လိမ့်မယ်….။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျမ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်အဖြူလေးဆိုရင် အဲ့ဒီဖိနပ်ချွတ်နေရာက ဖုန်တွေ သဲတွေပေပွနေလို့ ညစ်ပတ်ကုန်တာနဲ့ မွေးနေ့မှာတင် အမေဆူတာ ခံခဲ့ရသေး…။
အခွေတွေ ကြည့်ဖြစ်လို့များ မင်းသမီးဖြစ်ဖြစ် အရံဖြစ်ဖြစ်က ဖိနပ်လှလှလေးများစီးထားရင် အဲ့ဒီဖိနပ်မြင်လိုက်တဲ့အခန်းကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ရစ်ကြည့်လိုက်၊ Pause လုပ်လိုက် လုပ်တတ်လို့ ဇာတ်လမ်းက ရှေ့မတက်နိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့် အိမ်ကလူတွေရဲ့ မေတ္တာပို့ခြင်းခံရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်…..
တခါတလေ တစ်လတည်းနဲ့ ဖိနပ် ၄ ၅ရံပစ်ဝယ်တတ်လို့ ကျမ ပိုက်ဆံပြတ်ပေါင်း များပြီ….။ Shopping Center သွားရင် အကြောင်းသိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျမဖိနပ်တန်းဘက် မရောက်အောင် တခြားနေရာတွေက လှည့်ပတ်ခေါ်လေ့ရှိတယ်…..။ (လိုချင်တဲ့ဖိနပ်ကို မြင်မိလို့ မရခဲ့ရင် ကျမ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် စိတ္တဇဖြစ်တတ်တယ်…. :D)
ကျမ ကျောင်းသူဘ၀တုန်းကတော့ မုန့်ဖိုးတွေစုပြီး ဖိနပ်တွေ ၀ယ်ဖြစ်တယ်….
စစချင်းတော့ ကျမ စမ်းဝယ်ခဲ့တာ..အမေစီးတတ်တဲ့ Louis Dollar ပါ..။ နောက်တော့ ကျမ အဲ့ဒီဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို မကြိုက်တော့….။
အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်မှာ ကျမ ရူးသွပ်တာ Scholl ဖိနပ်တွေပါ….။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ တီရှပ်တစ်ထည်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ Scholl တစ်ရံစီးပြီး သင်တန်းသွားလိုက် ကျောင်းသွားလိုက်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ပီသခဲ့တာပေါ့…..။ သို့သော် သူက သိပ်မာလွန်းတော့ ခြေဖ၀ါးနေရာတွေက လမ်းလျှောက်တာများရင် အဆင်မပြေချင်တော့….(ကျမ ချေးများတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်…)
အလုပ်ဝင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွေမှာ…နာမည်ကြားဖူးထားတဲ့ Essence တို့ Lily တို့လိုမျိုးတွေကိုလဲ စမ်းဝယ်ကြည့်တယ်….။ ကျမ ဒီလောက် စိတ်တိုင်းမကျဘူး…..
ဟိုးတစ်လောက Ipanema တွေကို အတော်ရူးသွပ်လိုက်သေးတယ်….။ ပထမဆုံးဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရွှေရောင်ကြိုးသိုင်းနဲ့ Ipanema လေးရတော့ ကျမအတော် စိတ်ကောင်းဝင်ခဲ့သေးတာပဲ…..။ သို့သော် ကျမပဲ သိပ်မျှော်လင့်ထားလို့ပဲလား မသိ….။ ထင်ထားသလောက် မကောင်း….
Pencil Heel လို့ခေါ်တဲ့….ခဲတံအရွယ်…ဒေါက်လုံးသေးသေး ခပ်မြင့်မြင့်ဖိနပ်တွေကိုလဲ ကျမအတော် သဘောကျပါတယ်….။ ဒါလေးတွေများ စီးလိုက်ရင် ကျမ မြောက်ကြွသွားရောပဲ….သူတို့က ကျမကို ယုံကြည်မှုရှိစေပြီး Smart ကျနေတယ်လို့ တွေးမိစေတယ်….(အရှက်တကွဲ မှောက်မလဲသေးမချင်းပေါ့လေ…..)။ မြန်မာပြည်လမ်းတွေမှာ ဒါက တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်…..။ သို့သော် ဒီချစ်စရာ ဒေါက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ကျောက်ခဲချွန်တွေ ကျောက်စရစ်ခဲသေးသေးလေးတွေရှိတဲ့ လမ်းမှာ…သာခွေယိုင် ပုံစံမထွက်ဘဲ လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ ကျမ တော်တော်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်….။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကျမမှာ…ဟိုတံဆိပ်မှရယ် ဟိုလိုပုံမှရယ်လို့ အစွဲမရှိတော့….။
ဟိုတစ်လောက ဖိနပ်ရွေးရင်း ကျမစဉ်းစားမိတယ်….။
ကျမရွေးမယ့် ဖိနပ်တစ်ရံဟာ ကျမအတွက်…စီးလိုက်တိုင်း သက်တောင့်သက်သာရှိနေရမယ်…။ ခြေဖ၀ါးတွေ နာတာ ခြေချောင်းတွေပေါက်တာမျိုး မရှိရဘူး…။ ဒီဖိနပ်ကိုစီးထားလိုက်လို့….ကျမ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ လှပနေတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလဲ ရှိနေရမယ်…။ ဒီဖိနပ်နဲ့ ကျမ ဘယ်ပွဲလမ်းသဘင်၊ ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား…တင့်တယ်တဲ့ ပုံစံမျိုး၊ ၀င်ဆန့်တဲ့ ပုံစံမျိုးလဲ ရှိနေရမယ်….။ ဘယ်လမ်းကိုပဲ သွားသွား ချော်များလဲမလား၊ ထိန်းများလျှောက်ရမလား၊ ခြေများနာမလားဆိုတဲ့ တထိတ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေါ်မှာ ကျမမကြိုက်ဘူး….။ အချိန်မရွေးများ ပြတ်သွားလေမလားဆိုတဲ့ ဖိနပ်ရဲ့ Quality ကို စိတ်မချရတာမျိုးလဲ မဖြစ်သင့်ဘူး….။
သိပ်တန်ဖိုးကြီးပေမယ့် ကျမဂရုတစိုက် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စီးရမယ့် ဖိနပ်မျိုးတွေထက်စာရင်….ကျမလိုချင်တဲ့ဖိနပ်တစ်ရံရဲ့ အရည်အသွေးဟာ……ကျမသွားတဲ့ ဘယ်လမ်းကိုမဆို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ကျမယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့ Quality ၊ ၀င်ဆန့်တဲ့ပုံစံ၊ အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိနေတဲ့ အနေအထားမှာ သူရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်…..။
မမချွိ says: ဒါက အဲဒီ ပို့(စ) က ကိုယ့်ကော်မန့်။
ခင်ဇော် says: (Edit)
ဟိုနေ့က စိတ်ဂယောက်ဂယက်နဲ့ ကမန်းကတန်း မန့်သွားရလို့
ဖိနပ်ပို့(စ) ဆိုတော့လည်း ဖိနပ် အကြောင်းဥစားပေးပြောမယ်နော်။
၁) အကြိုက်ဆုံး ဖိနပ် ဒီဇိုင်း – တဘား ခြေမကွင်းလို့ ခေါ်တယ်။ ခြေမမှာ တစ်ကြိုးနဲ့ ခြေခုံပေါ်မှာ တစ်ကြိုး (၂ကြိုးပဲ ပါတယ်)
ခြေထောက်လေး သန့်နေမှ စီးလို့ လှတဲ့ အတွက် ပိုဂရုစိုက်ဖြစ်တယ်။
၂) ဖိနပ်ထိပ်ဦးကို လေးထောင့်ဆန်ဆန် ကျယ်ကျယ်ကို ကြိုက်တယ်။ မိန်းမဆန်ဆန် ထိပ်ဝိုင်းကို မကြိုက်ဘူးးး
၃) လုံးဝ အပါးကို ကြိုက်တာ။ ဒါမဲ့ အရပ်အမောင်းလိုအပ်ချက် အရ အမြင့် ရှာစီးနေရတယ်။ (စိတ်နာစရာကွယ်)
၄) နိမ့်နိမ့်မြင့်မြင့် ကြိုးသိုင်းကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ ခြေချင်းဝတ် တုတ်လို့။ ခြေသလုံးထိ ကြိုးပတ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေဆို အရူးအမူးကြိုက်တယ်။ (ရောမ ကျွန် ဖိနပ်လို့အပြောခံပြီး စီးပါတယ်)။
၅) ဖိနပ်ဆိုး(လ) ကို အခွက်လေးတွေပိုကြိုက်တယ်၊ အရင် စကော(လ) တို့ ဒရင်းတို့ က ပုံမျိုး ခြေထောက်နင်းရသက်သာလို့၊ ပိုလိုမှာလည်း ရှိတယ်။
၆) ပုံတော်ဖိနပ်အစစ်ကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ အမြင့်အလေးကြီးး၊ အာ့လေးစီးမိမှ ကိုယ်က ငြိမ်လို့ရတယ်။ (မငြိမ်ရင် လဲ မှာလေ၊ လေး လို့ ဖြေးဖြေးလျှောက်နေရတာ)
၇) ကန်းထရီး ဘု (လည်တို၊ လည်ရှည်) အရမ်းကြိုက်တယ်။ ထွားထွားလာတဲ့ ခြေသလုံးကို အားနာပြီး လည်တိုကို ဦးစားပေးရှာစီးပါတယ်။
၈) ဖိနပ် အရောင် ကို (အနက်၊ အဖြူ၊ သားရေရောင်(သမင်ရောင်)၊ အသားရောင်၊ တို့ကို) ဦးစားပေးရွေးလေ့ရှိပါ၏။
၉) ပွဲတက်ဖို့ဆို စိန်စီ ဖိနပ် တွေကို အရမ်းကြိုက်ပြီး ဝယ်ပြီး မစီးဖြစ်တာမို့ မပြောတော့ဘူးးး
၁၀) ကိုယ့် က ဘီလူးကိုယ်၊ ကျန်တာ မသိသာဘူးး၊ ဖိနပ် တစ်ရံဟာ တစ်လပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဂရုတစိုက် စီးစီး၊ တမင် တောကြိုအုံကြားမှာ မဆင်မခြင် စီးသလိုကို စုတ်ပြတ်သွားလို့ လူရှေ့ဆို ဖိနပ်မချွတ်ရယ်ဘူးး
Was this answer helpful?LikeDislike 1192
Kaung Kin Pyar says: ပြန်ေတာင် သတိရသွားပြီ… ဟီးးးး
မိန်းခလေးတွေအကုန်နီးပါး ဖိနပ်တော့ အရမ်းသဘောကျကြတာ.. အမှန်ပဲ…
လှတပတ ဖိနပ်လေးများ စီးထားပြီဆို မိုးပေါ်ရောက်သလို မြောက်နေတာရယ်… ဒါနဲ့ စမီးကို ဘူဒူ ဖိနပ်ချပွန်စာ ပေးကြမဲငင်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: ငင်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဖိနပ် ဝယ်မပေးကောင်းဘူးတဲ့။
ကိုယ့် ဆီက ပြေးလိမ့်မတဲ့။
Kaung Kin Pyar says: အို အို… ရတယ်..
မပြေးစေရဘူး….။ ချပွန်ဆာဒေကို ချစ်လွန်းလို့ ဘေးနားဆွဲထားမှာ…. Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ဖိနပ်ဝယ်ရင် ဒီဇိုင်းကြိုက်ပဟဲ့ ဆို
နောက်ထပ် ပထမဆုံး စဉ်းစားတာက ခွာ ပဲ။
နင်းလို့ ကောင်းသလား အိသလား ကြာရှည် စီးနိုင်သလား။
(ကိုယ့် အတွက် ဝယ်ရင်တော့ ပြေးရပဟဲ့ ဆို လွယ့်ပါ့မလား ပါ ထည့်စဉ်းစားတယ် ဟီးဟီး)
တချိုးဖိနပ် တွေက လှတော့ လှပါရဲ့ အောက်က ခွာ ခြေနင်း က မာ နေတာ တို့ အရမ်း ပါးတာတို့ ဆို စီးရတဲ့ လူ ခြေဖဝါး နာတယ်။
နောက် အပေါ်က ကြိုး ကလဲ မာခေါက်ခေါက် ဆို ခဏနဲ့ ခြေထောက် ပေါက်ကော။
ပြီးတော့ formal shoes/ dress shoes တွေဆို အောက်က ခွာ က အမာစား လား ကြည့်တယ်။
မဟုတ်ရင် လမ်းလျှောက်ရင် ဂေါက်ဂက် ဂေါက်ဂက် နဲ့
ထိပ် အရမ်းချွန်တာတွေ ဆို ရှောင်တယ် (အနော့် ခြေထောက်လဲ အပြားကြီးသကိုး)
ညှပ်ဖိနပ်၊ ကြိုးသိုင်း၊ အားကစား ဖိနပ်၊ ရှူး ဖိနပ် လည်မြင့်။ အဲ့ဒါလေးတွေပဲ စီးကောင်းတယ်။
Teva, Nike, Timberland, Converse တွေ စီးရတာ အတော်လေး ခြေထောက် ဇိမ်ရှိ။
ရန်ကုန် မှာဆို scholl
ခြေထောက်ကို မပေါက်တာ အာ့တွေက
မမချွိ says: အမျိုးသားတွေ အတွက် အတွေ့ အကြုံ စုံလင် လှသော ကော်မန့်ပါတကားးးး
ဖိနပ် အတွေ့အကြုံ ပြောတာာာ
ဂျက်စပဲရိုး says: shoe crazy ပေကိုး။
မတန်မရာ တွေ စီးလို့ ဖိနပ်ပေါက်တာလဲ များပြီ
pointed toes တွေ စီးပြီး ဆတ်ကော့လတ်ကော့ လမ်းလျှောက်ရတာလဲ များပြီ
ခွာအမာ စီးမိပြီး လမ်းလျှောက်ရင် မြင်းခွာသံ ပေါက်တာလဲ များပြီ ဟီးဟီး
မမချွိ says: အပျင်း ပြောသလိုပဲ။
စနီကာတွေ ဝေါကနဲရှူးတွေကို ကြိုးအသေချည်ပြီးမှ စွတ်လို့ သွတ်လို့ ဖိနပ်က မကွာပဲ ပြဲထွက်တာလေးရော မရှိဘူးးလားး
နာလေ စလူး ရောက်ခါစက ကိုယ်ကျပ်ရှပ်တွေ ဘောင်းဘီဒေါက်ပျောက်တွေနဲ့ ရှူးအကော့တွေ စီးတဲ့ သကောင့်သားတွေကြည့်ပြီး ဘာအလုပ်တွေလုပ်လို့ ဒီလောက် ကြပ်ထုတ် ကြော့ကော့နေကြတုန်းမသိဘူး တွေးဖူးတယ်။
ကိုယ်တွေ Construction Industry ကဟာတွေက လူကြမ်းတွေချည်းပဲ။
Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ကြိုးအသေချည်ပြီးမှ စွပ် တာ တော့ မရှိသေးဘူး။
ရှူး အကော့ စီးပြီး လမ်းလျှောက်မိလို့ ဆတ်ကော့လတ်ကော့ ဖြစ်တာရယ်။
အဲ့ဒီ အကော့ ထိပ် နဲ့ ရှိရှိသမျှ ခလုပ်တွေနဲ့ တိုက်တာရယ်။
ခြေပြားကြီး ကို ရှူး အကြပ် နဲ့ ညှစ်ထားသလို ဖြစ်တာရယ်။
ဒါတောင် ၆ နှစ် အတွင်း ရှူး စီးတာ ဆိုလို့ စုစုပေါင်း ၁ လ တောင် ပြည့်ရဲ့လား မသိ။း)
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ခုလက်ရှိ မြင်းခွါတစ်ရန်ကို စီးတိုင်း ခြေဖျားလေးထောက်ထောက်ပြီး စီးနေရတယ်၊ နို့မို့နားငြီးလို့ Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: မြို့ထဲ ဘူတာတွေမှာ မနက် ရုံးသွားချိန် ဆင်းကြည့်။
လေဒီရှူးသံတွေ ဖော်မယ်ရှူးသံတွေ ဂွပ်ဂွပ် နဲ့ စီးချက်ကျကျတွေ။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: အဲလိုဂွက်ချင်တိုင်းဂွက်လို့ကောင်းတဲ့ မြို့ထဲလိုနေရာမျိုး ကြုံလို့ရောက်ရင်တော့ ဖနောင့်လေးဆောင့်ဆောင့်ပေါက်ပြီး စီးတာပေါ့ မြို့ထဲကလဲ အခါ၅၀မှ၁ခါလောက် ကြုံတော့လည်း ခြေဖျားလေးပဲ အားကိုးနေရတယ် :'(
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ဖိနပ်ဆို ချွတ်ရစွပ်ရလွယ်တာမျိုး ရွေးဝယ်တာများတယ်၊ သိတယ်မလား ကိုယ်တွေက ခပ်ပျင်းပျင်းရယ် ရှူးဆို ကြိုးမချည်ရတဲ့ဟာမျိုး၊ ကြိုးချည်ရတဲ့ရှူးတောင် ချွတ်ရစွပ်ရလွယ်တဲ့အနေလောက် ကြိုးအသေချည်ပြီး စီးတာပါဆို..
ဒေါက်ဆို ဝေါင်ဝေါင်ရှေးတယ် ထွက်နေတဲ့သွား ဘွပြောင်းမစိုးလို့ မြန်မာဖိနပ်ဆို စီးကွင့်မပါ ရိုးရိုးဗြောင်မျိုးလေး သဘောကျတယ်။
ပုံတော်ဖိနပ်တော့ တခါမှမစီးဖူးလို့ ရရင်တော့စီးချင်သား (ရမားလို့ စကားခေါ်ကြည့်တာ ငိငိ) အရောင်ကတော့ အရင်က အနက်နဲ့နက်ပြာ ဒိုင်ခံဝတ်တယ်၊ ခုတော့ အညိုနဲ့ဝိုင်ရောင် ဓာတ်ကျနေတယ်။
အရင်က အထည်များအယားပြေမျိုးတွေ ဝယ်စီးတာများတယ်။
အာ့တွေက ကြာတော့မစီးနိုင်တာရယ် ပြတ်တာမြန်တာရယ်ကြောင့် ခုတော့ quality/comfort ဘက်လိုက်ကြည့်မား စဉ်းစားနေတယ် စကားမစပ် ဒေါက်ချွန်ချွန်မြင့်မြင့်တွေမြင်ရင် စမ်းစီးကြည့်ဖို့ထက် အဲဒေါက်ကို ဆဆကိုင်ရင်း “ဒါလေးနဲ့ဆို လူကောင်းကောင်းသတ်လို့ရတယ်” ဆိုပြီးစဉ်းစားမိနေတာ နဲနဲများလွန်နေမလားဟင် 😂😂
မမချွိ says: အရင် ဂျက်လီ ရဲ့ ဟစ်မန်း ကားထဲမှာ ဂျာပွန်စစ်ဗိုယ်ကို ကန်ထည့်လိုက်တဲ့ ဖိနပ်ရယ်။
ဆိုးကလို့ ထဲက ရှူကြည် က အစောင့်ကို ကန်လိုက်တဲ့ ဖိနပ်တွေရယ်ကို အရမ်းအားကျလိုချင်တာ။
မမဂျီးလည်း တကယ်ကို အထည်များ အယားပြေစီးတာများလို့ ခု ကွာလတီလိုက်မယ် ဆိုတော့ ဈေးကိုကြောက်။
ကိုယ့်ရဲ့ နူးညံ့မှုစံချိန်ကို ကြောက်
အကုန်ကြောက်နေတာနဲ့ တစ်ရံပဲ ဝယ် ပြီး ဖွတ်ညက်ကြေအောင်စီးပစ်နေရတယ်။
Kaung Kin Pyar says: ရှုကြည် ဓာတ်လှေကားထဲ ကန်တာမြန်းလားးးး သူ့ဝတ်စုံနဲ့ သူ့ဖိနပ်နဲ့ အထာကျနေတာရယ်…။
အဲ့အခန်းရစ်ကြည့်တာ ဘယ်နှခါလဲတောင် မသိဘူး..
နောက်ပြီး မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ပြန်တုန်း အိတ်လုတဲ့အခန်းရောပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: အဲဒီ မိုးရွာထဲ ဝတ်တဲ့ စတိုင်
စကပ်အတိုလေးရယ်ကို သိပ်ကြိုက်တာ ဂျွန်စောတောင် စောင့်ကြည့်ဖို့မေ့တဲ့ထိပဲ။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: သူတို့ဆွယ်တာနဲ့ so close တောင်ပြန်ကျိချင်သွားပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: အဲတလောမြန်း
ကျန်းဇီရီက ဘတ်ချောအွန်း ခေါ်ရိုက်ကြဒယ်။
ဒင်းတို့ နာ့ မင်းသားလေး တွေ (အဲလေ ခုတော့ ကြီးပီ) ကို ခေါ်တွဲကြတာ။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ကျန်း အသီးဒေကွဲ မနာလိုတိုရှည် tone နဲ့ :P
အောင် မိုးသူ says: ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဂျင်းနဲ့ ၀တ်တာလေး မှတ်သွားတယ်။ ကျော်လည်း အဲ့လိုပဲ ဖိနပ်ဆို ဘရန်းမှ မဟုတ်ဘူး ကိုယ်နဲ့လိုက်မှ ၀တ်တယ်။
မမချွိ says: ကိုယ့် ခြေထောက်နဲ့ အစဉ်ပြေဖို့ သာ အရေးကြီးတာပဲ။
တောတွင်းပျော် says: ဥတု ၃ ပါးစလုံး အကြမ်းခံသုံးစီးနိုင်တဲ့ရဲဘက်တာယာဖိနပ်အကြောင်းလဲ
မြန်မာပြည် ပြန်လာခါနီး ဘွတ်ဖိနပ်ကောင်းကောင်းတစ်ရံ
ဝယ်မဟဲ့ ဆို နာမည်ကြီးဖိနပ်ကုန်တိုက်ထဲ နေ့ တစ်ဝက်လောက် ပတ်ရှာပြီး
တစ်ခါစီးပြီး သိမ်းထားလိုက်တော့ တယ်။ သဘောမကျတော့ လို့ ။
တောထဲနေတုန်းက နေ့ ဆို ဖျင်ကြမ်းစစ်ဖိနပ်လည်ရှည်ကို
စမတ်ကျကျစီးတယ်။ အလုပ်သိမ်းရင် Osaki ကွင်းထိုး ရေစိုခံ ဆီထိခံ ဖိနပ်ပဲ
စီးတယ်။ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက် ဒီလိုအသားသေလာခဲ့ တော့ 
တောတွင်းပျော်တို့အကြိုက်က သူများတွေနဲ့ကို မတူတော့ တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: အွန်မယ်။
တညားဖြင့် ဂုံနီအိတ်စနဲ့ချုပ်တဲ့ ဖိနပ်ဖွာလန်ကျဲကို စတိုင်ဆိုပြီး စီးဖူးတယ်။ မြင်တဲ့သူတိုင်း စိတ်ပျက်အောင်ကို လှလွန်းလို့ တားယူရတယ်။
တာယာကို ပုံလှလှနဲ့ချုပ်ပေးရင် စီးအူးမှာ။
တောတွင်းပျော် says: ခေးးတော
ခေးးတော .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဖိနပ် ကတော့ အဲဒီလောက် သိပ် မခရေးဇီး ဘူး။
ပုံမှန်ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖိနပ် တွေ ဘဲ စီးတာများတယ်။
ဟိုးတုန်းကတော့ ပွဲ တက်ရင် သူများ တွေ ကို အားမနာဘဲ အမြင့် စီးခဲ့တာ။
Pencil heel တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Chunky heel အထူ မျိုး ပေါ့။
platform shoes ခေါ်တဲ့ ရှေ့နောက် တစ်ညီ အထူ မျိုးလဲ ကြိုက်လို့ စီးဖူးတယ်။
မမချွိ says: ကျနော်က ကိုယ့် အတွက်ကို ဆိုရင်တော့
လူက ဝဝပုပုလေး ဆိုတော့ Chunky heel များစီးလိုက်ရင် ကာတွန်းကားထဲက ဝက် အတိုင်းပဲ။
ဦးကျောက်ခဲ says: တို့များသိတာကတော့…
ငယ်စဉ်ထဲက ခြေညှပ်ဖိနပ်စီးရင် ခြေဖျားတွေကားတယ်…
ဒေါက်ဖိနပ်က ခေါင်းခေါက်လို့ရတယ် ၊ ဖိနပ်ပါးက ပါးရိုက်လို့ရတယ်…
ခုံဖိနပ်က အရေးပေါ်ရင် ဝါးရင်းတုတ်လို အားကိုးလို့ရတယ်…
အကျွမ်းကျင်ဆုံး နေ့စဉ်သုံးက Safety Shoe …
ထသွားထလာ CAT နဲ့ HUSH PUPPIES ….
အိမ်နေရင်းတော့ အောကတ္တီပါ လေးညှင်းရောင် … ဒါဗြဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: HUSH PUPPIES ဖိနပ်လေးတွေ လိုချင်မိ…း)
ညှပ်ဖိနပ် တစ်ရန် ကို ၁၀၀ လောက် ပေးရမယ်ဆိုတော့ကာ… အာဟင့်….
(ရှူးဖိနပ် တွေလဲ အတော် စီးကောင်းတယ် ဆိုပဲ)
မမချွိ says: ဆိုင်သွား၊
စီးကြည့် ကနေကို မတက်သေးဘူးး
ဂျက်စပဲရိုး says: ရှူး တော့ ဝယ်ဦးမှဘာ
အသက်အ၇ွယ်လေး ရလာဘီ ဆိုတော့ ကလေးတုန်းကလို ကညော့နေလို့ မဖြစ်ချေတော့ဘူး ဟီးဟီး
(ရုံးကို စက်ဘီး နဲ့ သွားတယ်ဆိုတော့ ရှူးဖိနပ်ကော့ကော့ကြီးနဲ့ဆို ကြည့်ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း)
မမချွိ says: ပုံထဲက Plain toe လောက်ဆို မဆိုးပါဘူးး
ဂျင်းနဲ့ပါ ညှပ်ဝတ်လို့ ရတယ်။
နာကတော့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကြံတာပဲ။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဟိ ရာထူး တိုးရင် သွားဝယ်စီးပစ်ဦးမယ် :P
မမချွိ says: ကက်တပလာ က အားကစားဖိနပ်ပုံ ဆေ့ဖတီးရှူးလေး လိုချင်တာလေ။
အောဂဒီဘာ လေးညင်းရောင်ကတော့ အကြိုက်တူ။
Thint Aye Yeik says: အနော့် ဖွေးဖွေးကိုတော့ အနော်က ခုံဖိနပ်ကလေး ဆင်မြန်းပေးမှာာာ
အခု ခုံ နှစ်လုံးအရင် ဝယ်ထားပြီ။ ကြိုးတပ်ပြီး စီးခိုင်းရုံပဲ
ဒါနဲ့ . . .
ဒီမှာ ကြည့်။ အဲ့ဒါကို ခုံဖိနပ်လို့ ခေါ်မလား။ ဘာလို့ ခေါ်မလဲ
မမချွိ says: ဖင်ထိုင်ခုံပုလေးကိုသာ သဲကြိုးတပ် စီးလိုက်ပါတော့လားး